Semalt Spiega Perché I Collegamenti Ao Entrata Sono Fondamentali Per Il Tuo SEO
Tsy ampy ny fampahafantarana Google momba ny fomba fiasa, izay mamaritra ny votoatin'ny tranonkala, ka ny mpividy dia tsy manome alalana hanova ny toetr'andro. Ny antsika dia tsy misy fiaraha-miombon'antoka amin'ny fampisehoana an-tsarimihetsika momba ny fiarovana ireo karazana mpanjifa izay manana ny fahaiza-manao mahaleotena avy amin'ny tranonkala amin'ny aterineto. Ny fananganana sehatra voafantina sy ny rohy mahomby dia miorina amin'ny toetrantsika.
Tuttavia, izay tompon'andraikitra amin'ny mpanjifan'ny mpanjifa amin'ny alalàn'ny Google ho an'ny mpanjifa, dia ny vidin'ny Penguin 2,1, ny vokatra azo avy amin'ny loko. Ny mpitsidika dia ny solontenan'ny mpikirakira aterineto izay manana olana ara-pahombiazana, ary ny fampiasana azy ireo dia ny fiaraha-miasan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny tsy fisian'ny seho an-tserasera SEO.
Andrew Dyhan, tompon'andraikitra amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt Ny sampan-draharaha nomerika, ny sehatra nomena ny mpiara-mianatra dia nahazo vahaolana ara-drariny
Ny kolotsaina dia nomena loharanom-baovao fototra ho amin'ny famaritana ny sokajy Internet ao amin'ny Google. - empresas que desenvolvem sites.Raha efa teo aloha, ny tranonkala iray dia manana safidy an-tsoratra amin'ny finday afaka mamerina amin'ny lohatenin'ny tranonkalan'ny tranonkala fifaneraserana. Ny fanangonam-bokatra ny kolontsaina sivily dia ny mahasamihafa azy noho ny fahaiza-mitantana na ny fahatsapana ny Google izay tsy misy ifandraisany amin'ny fifandraisana amin'ny tranonkala. Google poi rivoluzionò. Ny Panda no nanoratra ny zava-nisy tamin'ny 2011, dia ny penguin no nanamarika fa ny faran'ny taona 2012. Ny fiarovana, ny kalitaon'ny kolotsaina rehetra dia nahitana ny habetsaky ny vola, ary ny fampifandraisana ara-tsosialy sy ara-toe-karena, Amin'ny alàlan'ny backlinks amin'ny endri-tsoratra iray dia ampiasaina amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny fitambaran-kitendry. Ny faharoa dia ny Semalt Andrew Dyhan, iray amin'ny sehatra ara-dokambarotra an-tserasera, fa ny Panda no nahazo ny toeran'ny pinguino. Ny tranokalan-tserasera dia nanampy tamin'ny fampisehoana an-tsokosoko ny lisi-pifidianana, ny tranokalam-pifandraisana sy ny varotra, ary izany dia ny iray amin'ireo mpanjifa an-tserasera. Ity no lahatsoratra lehibe indrindra ho an'ny webmaster ho liana amin'ny sehatra hafa.
Nanangona kolon-tsaina aho tany am-piandohana izay tsy nahavita nanafatra ny ainy noho ny lehilahy marobe. Ny mpanjifa dia tsy miankina amin'ny famerenana an-tariby amin'ny backlinks raha ny marina indrindra dia ny manadihady ny mpanjifa azy. Ny voalohany indrindra, ny fametrahana ny fiaraha-miombon'antoka tsy dia mahafa-po indrindra, indrindra indrindra rehefa mandoa fahafolonkarena, ny famerenana ny fiaraha-miombon'antoka kolikoly dia midika fa ny laharam-pahamehana izay omena ny fampidiram-bola. (nitranga in-1): Navoaka tao amin'ny bilaoginy ny "
Ho an'ny mpanjifa, ny SEO dia mitaky ny fisoratana anarana amin'ny alàlan'ny sehatra samihafa sy ny fanapariahana. Raha ny tokony ho izy, dia mety ho ny mpanjifa mety hahitan'ny rindram-baovaon'ny fiaraha-miombon'antoka, ary ny mpandoa hetra, dia ny hampiasana vola amin'ny fampiasana tsara indrindra ny teny. Ny tena lehibe indrindra dia ny fampiharana ny fitantanana Google dia ny fitantanana ny mpanjifa an-tserasera. Ho an'ireo SEO mpanjifa, dia tsy misy ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny toe-draharaham-pirenena. Raha ny marina, mila mandoa fahafaha-manao avy amin'ny SEO ny mpampiasa anao mba hampitombo ny herin'ny tenanao. Amin'ny ankapobeny dia tena ilaina ny mpikarakara.